▷ 🎮 Killer Of Paradise 【Buyekeza Futhi Ulande ✅】 - 【The Comparison】 2022
🎮 Killer of Paradise 【Buyekeza futhi Ulande ✅】
I-Paradise Killer ingumdlalo oyisibonelo wokuzidela ophumelelayo emsebenzini wobuseshi njengeminye imidlalo embalwa.
Yima uma uke wakuzwa lokhu ngaphambilini: I-Lady Love Dies, "Isilo Sokucwaninga" sePharadesi, ikhishwe ekudingisweni kwayo kwezinsuku eziyizigidi ezi-3 ekupheleni komjikelezo wama-24 wesiqhingi, ukuhlangana kwakhe nedemoni elixolelwe. iSinqumo sakhe sokubulawa koMkhandlu weDolobha ukuthi, kuze kube yizolo ebusuku, uqondise yonke into. Isifiso sakhe saphakade sokubiza onkulunkulu sachithwa yilokhu okungenzeka noma okungelona itulo elikhulu, futhi kwavela umsolwa ocacile: isakhamuzi esigqilazwe idemoni esinomlando wobugebengu kanye nesisu esigcwele igazi loMkhandlu. Kukuwe ukuthola iqiniso lalokho okwenzekile, noma okungenani inguqulo yezenzakalo owanelisekile ngayo, inguqulo esondelene ngokwanele neqiniso, futhi ukhiphe isahlulelo ekuqulweni kwecala, ukuze iPharadesi lifinyelele esiphethweni salo. ukuphela. ukuphela kanye nomjikelezo olandelayo ungaqala.
I-Paradise Killer iwumdlalo wabaphenyi ongekho omunye, indlela enhle kakhulu, eyinqaba neyingqayizivele yomdlalo wokuzidela. Ikhulula imvelo yakho yesiqhingi, ikunikeze ukukhetha kwendlela ozoxoxisana ngayo nofakazi abangaba khona, lapho uhlola khona, nokuthi kungakanani okutholayo. Ngokwesakhiwo, ikhumbuza i-The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Inomqondo ofanayo wokuzidela ogwini, lapho isiqongo sentaba ngasinye sinomtsalane futhi ukutholwa okusha ngakunye kuzwakala kufanele. Angaqala ukuqulwa kwecala lokugcina noma ngasiphi isikhathi futhi ethule ubufakazi bakhe, axazulule izimfihlakalo eziningi zesiqhingi futhi agwebe ummangalelwa intambo. Kuyenzeka ubuyele ejajini unobufakazi obuncane kakhulu kanye nokuqonda okulinganiselwe ngalokho okwenzekile, noma ungenza ukuhlola okuphelele kwesiqhingi kanye nezakhamuzi zaso ezisele.
Isiqhingi naso siyafa. Izakhamuzi zakhona (abantu abathathwe "emhlabeni wangempela") ziye zanikelwa ngokwesiko, izinkonzo zaso zancipha futhi zavalwa, imigwaqo yakhona ilahliwe njengoba uMklami Wezulu eqhosha ngokuthi isiqhingi esilandelayo ekugcineni sizofinyelela ukuphelela. Abalingiswa abasele yibo bonke abangase bangenele izihlalo zoMkhandlu futhi bonke kufanele babhekwe njengabasolwa.
Lona igeyimu ehlola amatimu amakhulu, okuhlanganisa ukufuna komuntu kwaphakade ukuphelela, imvelo yobulungisa, nokuthi imiqondo yomuntu siqu "yeqiniso" ingahluka kanjani. Kuphinde kube wumdlalo lapho omunye wabalingisi enguweta wamathambo amathambo akhe adaywe abomvu ngenxa yothando. Omunye yisosha elinekhanda lembuzi elaba isithonjana sobuhle bokuqala esiqhingini futhi saba umthengisi wezimfihlo. Kuningi okwenzekayo ku-Paradise Killer, futhi konke kuhluke kakhulu, kuyaxaka, futhi kuyakhanya.
Kungumdlalo wokuzidela obekwe endaweni ehlukile futhi ebanzi, ozoyazi ngokuseduze. ILady Love Dies iqale izimisele ngokuphenya ngokubulawa koMkhandlu, Abagadi Bezulu, kanye nabaxazululi bemishini yabo engamawele ye-Perfection and Holiness, kodwa lapho ucwila kakhulu, kulapho kuvela khona izimfihlakalo ezengeziwe. Ukuqoqwa kobufakazi kusho ukukhuluma nomuntu ngamunye wasesiqhingini osele, ngamunye owenza umsebenzi okhethekile esibhakabhakeni, ukuqoqa amaphethini, ama-alibi, nemikhondo, kuyilapho ehlola isiqhingi kusukela phezulu kuya phansi ukuze athole imikhondo.
Lezi zingxoxo zilula - zivela njengenoveli ebonakalayo lapho ukhetha izinto zengxoxo kumenyu futhi wenze izinqumo zezingxoxo ngezikhathi ezithile ezingabonakali zinomthelela omkhulu kumphumela wengxoxo ngayinye. Kodwa kubalulekile ukuthi unake ukuthi ufakazi ngamunye uthini: Njengoba ubufakazi buyarekhodwa, ukutshalwa kwezimali kwakho ecaleni kanye nesithombe sakho sokugcina sokuthi icala kufanele lenzeke kanjani kuzoncika ekutheni ufunde kangakanani ukwazi umlingisi ngamunye. Kukhona ukulingisa kwezwi okuncane, kodwa umlingisi ngamunye uneziqubulo azozimemeza ngesikhathi sengxoxo njengasegeyimu yevidiyo yakudala. Ingase incinene ngokuhamba kwesikhathi, kodwa ngenhlanhla ingacishwa.
Ingxoxo ku-Paradise Killer yinhle kakhulu. Umdlalo unokuzethemba kokuphindaphinda amaqiniso angajwayelekile ngePharadesi nezakhamuzi zalo, futhi maduze nje uzofunda ukuthi iyiphi i-jargon nesibonisi esibalulekile esakhiweni, nokuthi yiziphi izingcezu ezakha umhlaba kuphela. Kuzo zonke izici zenganekwane zasendle zomdlalo, abalingiswa bawo basekelwe ezimweni ezikhonjwayo kanye nemizwa. Ngaphansi kwabo bonke ubukhazikhazi nezimo zabo, bangena othandweni (noma isifiso), abasithandi isikhundla sabo emphakathini, balangazelela ubukhulu, futhi bayahleba ngomunye nomunye. Ubuciko bezinhlamvu ze-2D buyamangalisa futhi - umdwebo obonakalayo womlingiswa ngamunye uboshelwe emlandweni wabo, okusiza ukuthi ulandelele indaba yomlingiswa ngamunye nakho konke okufundile ngaye. Ngeshwa, kunezinkinga eziningi zohlelo lolimi embhalweni, kufaka phakathi ama-aphostrophe amaningi abekwe kabi, kodwa ukubhala kuhle kakhulu.
Laba balingisi banezinkulungwane zangempela zesizinda nomlando phakathi kwabo, kanye nobudlelwano babo obuthuthukayo neLady Love Dies obungathuthukiswa ngokukhuluma nabo njalo, okungaholela ekwazisweni okwengeziwe kwembulwe. Igeyimu yenza umsebenzi omangalisayo wokudlulisa konke lokhu ngaphandle kokucwila ezindabeni ezeqisayo, ngezinhlamvu ezicacile ezikhanya kahle. Amakhasimende angaba khona anqwabelene phezu kwezambulo, ukuthuthukiswa kwetulo, nemininingwane yengozi mayelana nesistimu ye-Heaven Finder abadlali bamageyimu ababhalise kuyo, futhi bengilokhu ngimangele ukuthi kulula kangakanani ukuyilandela.
Kukhona ukugeleza kwemvelo kokuqhubeka. Ijubane lomdlalo liyamangalisa - emahoreni angu-15 wokudlala, angikaze ngizizwe ngilahlekile noma ngingazi ukuthi ngenzeni ngokulandelayo. Kuhlale kunezinjongo ezicacile: ukuhlola indawo ongakaze uyivakashele; buyekeza ufakazi ukuze uthole ubufakazi obusha; thola ithrekhi ethile oyilandelayo esigabeni "samanothi" esikrinini sokumisa isikhashana; thola izindawo eziphakeme futhi useshe ezinye izinhlamvu zemali ze-"blood crystal" ezihlakazeke kuso sonke isiqhingi. Ihambisana nohlelo lwekhompiyutha lwe-LLD lwe-"Starlight", olukwazi ukuhlaziya ngokuzenzakalelayo amasampula e-DNA, lugebenge amakhompyutha futhi luqoqe ulwazi oluwusizo, futhi noma yini eyitholayo iqoqwe kumenyu yokumisa isikhashana. Ngasekupheleni komdlalo, ngachitha isigamu sehora esihle ngifunda ubufakazi engangibuqoqile, ngihlanganisa wonke amachashazi ekhanda lami, ngenza isiqiniseko sokuthi ngithola isithombe esihle salokho okwenzekile. I-Paradise Killer iyakwazi ukuba yinkimbinkimbi futhi icace ngasikhathi sinye, ihlanganisa uchungechunge oluyinkimbinkimbi lwamaphethini kanye nama-alibis ngaphandle kokukukhungathekisa.
Lesi siqhingi sikhulu, sinamagugu amaningi afihliwe kanye nezinkomba ongazithola uma uzimisele ukonga isikhathi. Ngenkathi ngihlala ngizabalaza emidlalweni ukuze ngifunde amamephu amakhulu, ngithole ukuthi ukwakheka kweParadise Killer kwenze kwaba lula ukuqonda ukuthi indawo ngayinye ikuphi uma iqhathaniswa nawo wonke amanye amasayithi. Akungithathanga isikhathi eside ukufunda izimpawu zendawo eziyinhloko zegeyimu, futhi kukhona ukugeleza kwemvelo kanye nomngcele ocacile wendawo ngayinye. Izindlu zezakhamizi ziqukethe amafulethi aminyene, amabhilidi ezindlu amabhilidi amabhilidi okuqoqwa kuwo ngokuzithandela, kanye nesistimu yendle okufanele ihlolwe; Izindawo zezimboni nezolimo ziqukethe amaphazili alula ongawaxazulula ukuze uthole izinkomba kanye nesiphithiphithi samaphasishi ongahamba kuwo; Isakhiwo somkhandlu kanye nezindlu zabasolwa zikhanya ngokunsomi negolide, zihlotshiswe ngezakhiwo nobuciko obungajwayelekile. Ukuze uqonde ngempela isivumelwano, uzodinga ukucophelela kakhulu, ulandelele yonke iyintshi yesiqhingi, futhi ulandelele yonke into oyitholayo. Izikhathi eziningi, okutholakele ngeke kukhokhe kuze kube amahora ambalwa kamuva, futhi lokho okubonakala kuyizinkomba ezincane kungaholela ekwambulweni okukhulu.
Umdlalo ugcwele okubonakalayo okunamandla, okunikezwe ngesitayela somdlalo esihlukile - cabanga nge-PS2 yenkolo ebukekayo, exakayo kancane futhi engaqondakali, ethuthukisiwe ukuze ibukeke iyinhle ngokwezindinganiso zesimanje njengoba ungakhumbula. Kuyamangaza ngokubukeka, naphezu kokuthungwa okuthile okulula kanye (uma u-Switch) nezinkinga ezincane ze-pop-up. Kunento yakudala neshaqisayo ngePharadesi, futhi umklamo obonakalayo womdlalo uhambisana kahle nokulandisa kwawo. Kuyipharadesi elinegazi, lapho izakhiwo ze-baroque konkulunkulu zibusa, lapho amakhaya angenalutho kanye namabhizinisi ezakhamuzi zakhona eshayisana nokweqisa kwemidwebo yalesi siqhingi, futhi okwenze kwaba nokwenzeka ukuthi inkampani eyodwa yeziphuzo ithi iyona yedwa. ngamunye. Umshini wokuthengisa. Yindawo eyinkimbinkimbi futhi ibonakala ekwakhiweni komdlalo. Ukuhlola isiqhingi kusuka phezulu kuye phansi kuyajabulisa - kukhona umuzwa wangempela wokuthi wenze umsebenzi omuhle wocwaningo, futhi igeyimu iklomelisa ukucophelela. Hhayi nje ngobufakazi, kodwa amaqanda ama-Easter amaningi kanye nemibono emangalisayo, eyinqaba ukuze ujabulele. Kuphinde kube yinto enhle ebuhlungu - akakhohlwa ukuthi isiqhingi sizobhujiswa ekupheleni kophenyo lwakhe, ukuthi konke lokhu kuba khona kuze kube yilapho icala lakhe lifika esiphethweni, kanye nenhlekelele yemvelo yalokho.
Izimfihlakalo ezisenhliziyweni yakho konke zinkulu, kukhona ukusonteka nokuphenduka okwenzekayo njengoba udlala futhi uqoqa ubufakazi obusha. Akufani noPhoenix Wright, lapho iqiniso likhulunywa ngochungechunge lwezambulo ekwahlulelweni kokugcina. Kunalokho, zonke izambulo ezinkulu zeza phakathi nocwaningo lwami, futhi kuphela ngenxa yokuthi ngasebenza ukuze ngizithole. Kungenzeka ngokuphelele ukuqala umdlalo wokugcina ngaphandle kokwazi wonke amaqiniso, kodwa ngithole ukuthi ngilujabulele ucwaningo lwami kangangokuthi ngenqaba ukuyeka kwaze kwaba yilapho engasekho "amanothi" esikrinini sokumisa isikhashana, futhi nganginakho, kuze kube sezingeni kungenzeka. Ngabona, ngahlola zonke izindlela.
Ngesikhathi sokuhlolwa kokugcina, umdlalo wawungibeke endaweni yengqondo ethakazelisayo: Ngangiqiniseka ngama-90% ngokwenzekile, kodwa lapho ngiyokwethula ubufakazi bami, kwacaca ukuthi 'kukhona umehluko omkhulu phakathi iqiniso lobufakazi nokuthi ubulungiswa bangempela nesijeziso esilungile kungaba njani...
Landa Umbulali Wepharadesi